I-Ramones Logo: Ibali le-Ramones Logo eyaziwayo kunye neNqaku | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 11/04/2022 10:17 | Abadlali, ngokubanzi
Kukho amaqela omculo agcine impumelelo yawo ixesha elide kunye nemisebenzi emide. Iqela lomculo aliphumeleli nje kuphela kwinto eliyiqambayo okanye eliyenzayo, kodwa nakumfanekiso eliwudlulisela kwabanye. Umfanekiso ukwaluqwalaselo lweleyibhile okanye uphawu olunokuthi ludityaniswe nento yobuqu okanye kwimbali yeqela okanye uhlobo lomculo ngokwalo.
Yiyo loo nto kule post, Sizilungiselele ukukwazisa kuhlobo kunye neqela lomculo elimamele amashumi eminyaka, uRamones. Siyathemba ukuba ufunda okuninzi okanye enye into malunga neli qela laziwayo kunye nembali.
Nika umdlalo esiwuqalayo.
1 ramones yintoni na
1.1 Ibali lakhe
1.1.2 Kwiminyaka kamva
1.1.3 ii-albhamu kunye neengoma
2 Imbali yelogo yeRamones
2.3 Inkqubela phambili kunye notshintsho
2.4 hits kakhulu
3 Amanye amaqela afanayo
3.1 Ipelepele ebomvu ebabayo
3.2 Izibhamu neerowuzzi
ramones yintoni na
IiRamones zithiywe ngelinye lawona maqela adumileyo erock kuyo yonke imbali yomculo. Zaziyimitha ephawulweyo, phambi nasemva, kwimbali yamatye kwiminyaka yoo-70s. Babengabakhuthazi beentlobo ezifana ne-punk apho babexuba i-rock kunye ne-pop, i-surf, i-bubblegum kunye nezinye iindidi ezifana ne-garage rock.
Iingoma zakhe zagqama zaza zaba yimihobe emva kokuyilwa kweengoma ezahlukeneyo zexesha elifutshane. Eli qela lidumileyo lazalwa laza lavela kwindawo zaseQueens (eNew York), ngo-1974, emva kokuba liqela elaliphawulwa ngokuxuba iingoma zalo ezisuka kuma-50s kunye nama-60s. Igama layo elikhethekileyo lingenxa yebinzana elidume kakhulu elithi "Dee dee Ramone" ukuba ukhankanye ingcebiso yeeRamones kwaye wayenxibelelene ngokusondeleyo namanye amaqela anjengeBeatles.
Amalungu okuqala eqela yayiyi-guitarist uJohnny Ramone, i-bassist Dee Dee Ramone, kunye ne-drummer / imvumi uJoey Ramone. Babedla ngokudlala kwindawo encinci yedolophu ebizwa ngokuba yiCBGB, apho emva kweminyaka baba ngamabali e-rock.
Ibhendi Yadalwa ngo-1974 kwisixeko saseQueens eNew York. Ngexesha leentsuku zabo zokuqala, baqala kwaye badlala kwiindawo ezincinci okanye kwiindawo zasebusuku njenge-CBGB pub eyaziwayo. Ekuqaleni, iqela lalinabaculi abane.
Ibhendi yafumana impumelelo enkulu kodwa, emva kweminyaka engama-22, iqela lathi ndlela ntle kumalungu amathathu kwamane aliqambileyo, kuba abathathu kubo basweleka kunyaka ka-2001 no-2004. Kwiminyaka kamva, ngo-2014, inxalenye yokugqibela yayiza kufa. Kwasala igubu kuphela, owagqiba kwelokuba asayine kwaye enze ibhendi entsha emva kokunyamalala kweqela leRamones.
ii-albhamu kunye neengoma
Ibhendi irekhode ii-albhamu ezili-14 kwisitudiyo sabo, iingoma ezingama-212 kwaye zenziwa kwiikonsathi ezingama-2.263. Malunga nonyaka ka-2011 okanye ka-2012, iqela lafumana iGrammy yokuqala. Kwaye phakathi kweengoma zakhe ezininzi, ezinye ezibaluleke kakhulu zibonakala, ekuhambeni kwexesha, ziye zaba yimihobe emikhulu. Phakathi kwazo kugqame "iBlitzkrieg Bop", "I-KKK Yathatha Usana Lwam", "Rockaway Beach", "Beat On the Brat", "Sheena Is a Punk Rocker" okanye "Bonzo Goes to Bitburg".
Ngamafutshane, eli qela liye lagcina imbali ende yempumelelo enkulu kumsebenzi walo, de kwaba yinto ekhoyo namhlanje.
Imbali yelogo yeRamones
Umthombo: I-Indie Namhlanje
I-logo yeRamones sele iluphawu namhlanje. Siyabona ukuba amawaka kunye namawaka athengisiwe kwaye amawaka ee-t-shirts kunye nale logo ebandakanyiweyo iyaqhubeka nokuthengiswa. Yaye akufanele kulindelwe ukuba iivenkile ezininzi ziye zatshayelwa zezi shirts, ekubeni uphawu kunye nebhendi zigcina umyalezo, owaziyo kuphela umyili kunye nabo.
Source: mthandi womculo iliso
Umyili welogo, wayengumMexican Arturo Vega, umyili kunye nomzobi owaziswa kakhulu kwiqela leRamones, ekubeni yayibubuhlobo obupheleleyo bezinye iinxalenye zebhendi. Ngaphandle kwamathandabuzo, wayengumdali yaye nguye owagqiba ekubeni adibanise umzobo wokhozi ngamagama ahlukeneyo amalungu eqela. Injongo yayikukudala umfanekiso ozama ukumela amaxabiso ebhendi kuluntu, ngokwaneleyo ukwahlula iqela kwabanye.
Umzobo weKhozi uvela kwimvelaphi yaseMexico kwaye waphefumlelwa lukhozi kwiflegi yaseMexico. Le ngcamango yavela ngomfanekiso apho umyili ubonakala ephethe ibhanti elinokhozi oluchaziweyo kunye nesikipa esineentolo aziyilileyo.
I-logo yagqitywa ukwenziwa emva kohambo olwalwenziwa libhendi ukuya eWashington. Emva kokufika kwindlu emhlophe, umyili wafumana inkuthazo entsha yoyilo lwelogo, ekubeni yayiphefumlelwe zizitampu eziliqela ezazifakwe kwiflegi yaseMelika ngokwayo.
Ngenxa yesi sizathu, wagqiba ekubeni asebenzise uphawu lweSebe likaRhulumente. Kamva yaquka ezinye iinkcukacha ezincinci, ezifana ne-baseball bat, i-laurel eyaziwayo okanye amasebe omthi we-apula.
Inkqubela phambili kunye notshintsho
Emva kwexesha, umyili wagqiba ekubeni atshintshe iinkcukacha ezifana ne-laurel eyaziwayo yoyilo oluthile kwihempe. Iintolo ezisentloko nasesifubeni sale ntaka zongezwa emva kwempefumlelo eyayifumanayo ekudaleni ihempe yayo. Uphinde watshintsha ezinye iimotto okanye amabinzana asemthethweni ebhendi, umzekelo wazisa ibinzana elidumileyo elithi “Hey Ho Masihambe”.
Emva kokuyilwa kwelogo, yaqala ukubonakala kwicwecwe elithi Shiya Ekhaya. Uphawu oludumileyo luye lwaqatshelwa kwihlabathi jikelele, kangangokuba lwaba luphawu lwesizwe ngaphezu kwelogo yebhendi yomculo. Yonas abalandeli bakaRamones baqala ukuthenga ezinye zeehempe ezinophawu olufakiweyo, kangangokuba kude kube namhlanje, ziyaqhubeka zithengwa kwaye zithengiswe kwezinye iivenkile zamatye.
Ngaphandle kwamathandabuzo, yonke into evela ekudalweni kwelogo yayinkulu kwaye iyimpumelelo eninzi. Kakhulu, ukuba iRamones iseyeyona nto iphulaphulwa kakhulu kumaqela e-rock kwizicelo ezifana neSpotify. Kuyamangalisa ukucinga ukuba, emva kweminyaka emininzi yokulahlekelwa, iqela liyaqhubeka liphila kubo bonke abo baliphulaphulayo imihla ngemihla. Ummangaliso opheleleyo.
Amanye amaqela afanayo
Ipelepele ebomvu ebabayo
Elinye iqela elikwagqamayo ngempumelelo yalo yiRed Hot. Ibhendi eyadalwa ngo-1983 eLos Angeles, eCalifornia, ikwayinxalenye yembali yerock kwihlabathi jikelele. Umculo wabo netalente yabo ifikelele mbombo zonke zehlabathi, nto leyo ethetha ukuba nabo benze imbali.. Zonke iingoma zabo zaziwa kakhulu kodwa ezinye ezigqame kakhulu zethi “Californication”, “Otherside” nethi “Can't stop”.". Ngamafutshane, liqela elihambisa iimvakalelo ezintle kunye namandla amahle.
Liqela lomculo werock elenziwe kwisixeko esikufutshane neHollywood, malunga neSanta Monica, eLos Angeles ngo-1985. Lelinye lawona maqela aphumeleleyo e-rock ehlabathini, kangangokuba bakhe bajikeleza ihlabathi njengomculo wabo.. Ngokumalunga nekhulu elinamashumi amahlanu ezigidi zeerekhodi ezithengisiweyo, ukuthukuthela kwangempela ukuba sithetha ngokubetha kunye namanani. Ezinye zeengoma ezithe zagqama kuzo zethi “Sweet Child O’Mine”, “Welcome to the jungle” okanye “November Rain”. Imisebenzi yobugcisa eyiyo enokukhapha naphi na.
Ukuba bekufuneka siqaqambise enye yeentsomi ezinkulu zelitye okanye intsimbi enzima, ngokungathandabuzekiyo ibiya kuba yiKISS. Ibhendi yaqulunqwa kwisiXeko saseNew York ngoJanuwari 1973. Baliqela abangakhange bagqame ngeengoma zabo kunye neengoma zabo kuphela, kodwa kwakhona. ngezinxibo zabo kunye nezithambiso rhoqo xa betsiba eqongeni. Eli qela laqala imitsi yalo emikhulu malunga ne-1960s, xa laliqatshelwe ngabaphulaphuli abaninzi kakhulu. Ezinye zeengoma zakhe ezidumileyo zezo "I was made for lovin' you", "Heaven's On fire" kunye ne "I Love it Loud".
Iingcango ziye zaba lelinye lamaqela amatye okanye i-indie rock ankqonkqoze emnyango wempumelelo kunye nodumo. Yadalwa kwisixeko saseLos Angeles, eNew York ngo-1965. Yaba lelinye lamaqela athe agcina umsebenzi omfutshane kodwa onzima kakhulu, othwele impumelelo emininzi kwihlabathi jikelele. Babeyinxalenye yamanye amaqela amaninzi e-rock ye-70s kunye ne-80s kwaye babelane ngamanye amanqanaba angcono. Ezinye zeengoma zakhe ezidumileyo "Abakhweli kwisaqhwithi" okanye "Ndichukumise". Ngaphandle kwamathandabuzo, amaculo amabini angalibalekiyo.
Asikwazanga ukusichitha esi sithuba, ngaphandle kokuba siqale sikhankanye uKumkanikazi wamatye, uKumkanikazi. Iqela elidumileyo leNgesi lifumene impumelelo enkulu ekungekho nelinye iqela eliye laphumelela ngexesha labo lomculo. Kangangokuba, baye bakwazi ukuzalisa amawaka namawaka amabala emidlalo. Ibhendi ekhokelwa nguFreddy Mercury, yaya kwintsholongwane ngoko nangoko kwaye ukongezelela, babelane ngeempumelelo ezinkulu kunye nabalandeli babo ngeengoma ezinjengalezi: «Siyi-Championship», «Bohemian Rapshody», «Ndifuna ukukhululeka» njl. Uluhlu olude lweemixholo ezinkulu eziye zakwazi ukugcwalisa iingqondo zomntu ngamnye kuthi kwimbali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » ilogo yeramones
Iintlobo zamanani ee tattoos